တရုတ်နိုင်ငံတွင်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး, အီလက်ထရောနစ် high မြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ
Home > ထုတ်ကုန်များ > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း, မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အီလက်ထရောနစ်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag အာရုံခံအသုံးပြုခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးသည်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Airbag အာရုံခံအသုံးပြုခြင်း Reciever: 1. ဗို့အား: AC / DC 24V 2. Power: 1.5W 3. Output မုဒ်: relay ကို (NO NC) 4. Load လက်ရှိ: 1A 5. တုံ့ပြန်မှုအချိန်: <0.3s 6. ထိန်းချုပ်ရေးအကွာအဝေး:> 15 သန်းနဲ့...
တရုတ်နိုင်ငံ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း ပေးသွင်း
1.Driving system ကို: အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါးကို Servo System ကိုမော်တာနှင့်ထိန်းချုပ်မှု, မော်တာ SNMA / SEJ + လျှော့ချ + အနားကွပ် + အန်ကုဒ် + ထိန်းချုပ်သေတ္တာ
2.Other ဆက်စပ်ပစ္စည်း: အလယျပိုငျးလူမီနီယံဘား, အောက်ခြေလူမီနီယံဘား, လူမီနီယံဒေါင်လိုက်လမ်းကြောင်း, သံမဏိဒေါင်လိုက်လမ်းကြောင်း, စုတ်တံ, ပတ်ပတ်လည်နိုင်လွန်ချွတ်, PVC လိပ်, လှိမ့သံမဏိပြွန်ပြည့်စုံ, စည် ;; ပြွန်ကိုလှိမ့်အဘို့ s ကိုဖြစ်, ဘက်အဆုံး, stainless ဖုံးလွှမ်း သံမဏိအဖုံး, သံမဏိပြွန်, လေအိတ်အာရုံခံစနစ်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအလင်းရောင်ခြည်, မိုက်ခရိုဝေ့အာရုံခံကိရိယာ 24 Gigahertz, PVC ဂဟေဆော်စက်, မီးခိုးများနှင့်မီးအာရုံခံကိရိယာများ, PVC ပွင့်လင်းင်းဒိုးသံလိုက်ကွင်းဆက်, photocell, ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှု, လက်စွဲစာအုပ်တွန်းအားပေးခလုတ်ကို, အသံသတိပေးနှိုးဆော်သံ Led ဆီမီးခွက် မီးပွိုင့်
1) .24G ရေဒါအာရုံခံကိရိယာ:
နည်းပညာ: မိုက်ခရိုဝေ့ Processor ကို
အများဆုံး installation ကိုအမြင့်: <5meter
ထုတ်လွှင့်ပါဝါကိုသိပ်သည်းဆ: <5mw / cm2
ပါဝါစားသုံးမှု: <1W (VA သို့)
installation ထောင့်: 0-90 ° (lengthways) -30-30 ° (crosswise)
ထောက်ပံ့ရေးဗို့: AC အ & DC က 12V-30V
ခွင့်ပြုချက်အီး & ISO9001
power supply, AC / DC က 12-30V
static လက်ရှိ 25A
mounting အကွာအဝေးမက်စ် 10
NO သို့မဟုတ် NO./NC အားဖြင့် Done NC အဆက်အသွယ်။ အဆက်အသွယ်ရွေးချယ်ရေး
အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် -42 ℃မှ + 45 ℃
အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆ 10 မှ 90% RH အ
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အတိုင်းအတာ (controller ကို) 123 * 50 * 32mm (L ကို * W * H ကို)
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အတိုင်းအတာ (ကို Magic မျက်စိခေါင်းကို) 19 * 13mm (L ကို *: D)
3) ။ remote control
operating ဗို့အား: AC220V / 50HZ + -20%
; စူပါရုပ်ပျို module တစ်ခုအားဆန့်ကျင်နှောင့်ယှက်≤100mW: ပါဝါထုတ်လွှင့်
operating အပူချိန်: -30 ℃ - + 70 ℃
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 433MHZ; transmitter ကို 1527, encoding က chip ကိုသန်းပေါင်းများစွာသော
sensitivity ကို Accept: ≤110dB
အရေအတွက် configure: ကြိုးမဲ့အရေအတွက်ကို; စက်ရုံ configuration ကို transmitter ကိုနှစျယောကျတညျး။ PT2272 ဒီဂျစ်တယ်ဒီကုဒ်ဒါ chip ကိုတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်
function ကို configure: ချ Up ကို, ကိုရပ်တန့်, Anti-သော့ခတ် Full-featured မျိုးပွား
4) ။ သံလိုက်ကွင်းဆက်
ဗို့: 12V AC / DC + -10% 24V 115V AC အ + -10% 230V
ဆက်လက်လျှပ်စစ်ထွက်ရှိ:7/ 250V AC အ
frequency range ကို: 20 200K မှ Hz
တုန့်ပြန်အချိန်: အသင်္ချေ (စက်ရုံ setting ကို) သို့မဟုတ် adjust အချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်
sensitivity: 0.01%% 0.1 မှ3အဆင့်ဆင့်သို့ခွဲခြား
electromagnetic compatibility (EMC) EM50081-1 နှင့် EN50082-2 နှင့်အတူလိုက်နာ
detection ကွင်းဆက် induction: 300uH မှစံပြတန်ဖိုးကို 80uH 100uH မှ 40uH ၏ကန့်သတ်
operating အပူချိန်: 70 ℃မှ -25 ℃
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: 85 ℃မှ -40 ℃
ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ: <90% Non-condensing
အပူချိန်လျော်ကြေးငွေ: 50 ℃ / ဇမှအလိုအလျောက်လျော်ကြေးငွေတက်
ချိတ်ဆက်မှုအမျိုးအစား: 11 pin ကို Din ရထားလမ်း socket
dimensions: 41 * 78 * 85 မီလီမီတာ (width ကို * အမြင့် * အရှည်)
5) ။ လက်စွဲတွန်းအားပေး button ကို
ဤသည်ထွက်ပေါက် switch ကိုခလုတ်ကပိုကြော့နှင့် fashionbale ကြည့်လုပ်ကို ABS ၏ဖန်ဆင်းထားသည်နှင့် built-in ဖြစ်ပါတယ်ညွှန်ပြချက်အလင်း။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်စသည်တို့ကိုအများပြည်သူဝင်ပေါက်တံခါးအများပြည်သူတံခါး, အိမ်, ရုံး, ဟိုတယ်အတွက်သုံးနိုင်တယ်
Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုံခြုံရေးသည်တံခါးဖွင့် Switch Exit ရန်တံခါးကို Exit ကို Button ကို Push ကို
ကို ABS ပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့
စက်မှု Life: 500,000 စမ်းသပ်
6) ။ switch ကိုအန်ကုဒ်ကန့်သတ်ရန်
output ဗို့: မြင့်သောvoltage≥85% Vcc, အနိမ့်voltage≤0.5V
anti-တုန်ခါမှု: 50 / s နဲ့, 10-200HZ, XYZeach လမ်း2ကြိမ်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး: ရေစိုခံ, ရေနံသက်သေပြ, ဖုန်မှုန့်ကာကွယ်တားဆီးရေး, IP54
အဆိုပါ output ကိုကုဒ်စနစ်က: binary code ကို
operating ဘဝကို: MTBF≥30000 (+ 25 ℃, 2000rpm)
အလှည့် inertia: 4.0x10-8kgm²
အများဆုံးဝန်: radial direction20N
Axial ဦးတည်ချက်: 10N
အလေးချိန်: 0.4kg အကြောင်းကို
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး အီလက်ထရောနစ်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါးဆက်စပ်ပစ္စည်း